Zvose mapeji epa webhutori ruzivo rwemashoko pamusoro pevashanyi vavo. Aya mashoko anosanganisira, asi haasi kuongororwa chete, IP kero, browser browser, timestamps uye kureva mapeji. Hapana ruzivo urwu runogona kuona iwe pachako vashanyi chaivo kune ino. Mashoko aya anongororwa nokuda kwehuwandu hwehutungamiri nekugadzirisa zvinangwa.
Cookies uye Web zvikwangwani
Kana zvichidikanwa, Fitness Maitiro anoshandisa makiki kuchengetedza ruzivo pamusoro pezvido zvemuenzi uye nhoroondo kuitira kuti zviri nani kushandira mushanyi uye / kana kupa mutenzi ane zvigadzirwa zvakagadzirirwa.
Kutengeserana pamwe nevamwe nevamwe vatatu vanogonawo kushandisa makiki, ma-scripts uye / kana web beacons kuti vaone vatashanyi kuiti yedu yepaiti kuitira kuti varatidze zvivako uye mamwe mashoko anokosha. Kufurikidza kwakadaro kunowanikwa zvakananga nevevatatu kuburikidza nevanoshumira vavo uye kunozviisa pasi pemitemo yavo yega yega.
Cherechedza kuti iwe unogona kuchinja shanduro yako yekugadzirisa kuti usiye makiki kana uine zvinetso zvevamwe. Kuvhara makiki panzvimbo dzose hazvikurudzirwe sezvo zvingakanganisa kushandisa kwako kweimwe nzvimbo. Nzira yakanakisisa ndeyokudzivisa kana kubvumira makiki pane imwe nzvimbo ye-site. Tsvaga mushandisi wenyu zvinyorwa zvemirayiridzo pamusoro pekudzivirira makiki uye dzimwe nzira dzokufambisa. Urongwa urwu web browser browser kuchengetedza hukama hunogonawo kubatsira.
Zano rakakosha Pamusoro peGoogle Advertising
Chero zvipi zvitsva zvinoshandiswa neGoogle, Inc., uye makambani akabatanidzwa anogona kutungamirirwa achishandisa makiki. Aya makiki anobvumira Google kuratidza zvikwata zvichienderana nekushanyira kwako kune ino uye mamwe mashandisi anoshandisa maGoogle kutengeserana. Dzidza kuti ungazviita sei sarudza kubva paGoogle's cookie use. Sezvataurwa pamusoro apa, kutevera chero kupi zvayo kunoitwa neGoogle kuburikidza nekiki nezvimwe nzira zvinowirirana nehutano hwehutano hweGoogle.
Kunetseka kana mibvunzo pamusoro peiyo purogiramu yepachivande inogona kutaurirwa fitnessrebates@yahoo.com kuti uwane kutsanangurira mberi.
Iyi webhusaiti inogona kuwana mubhadharo nokuda kwekutenga kunowanikwa kuburikidza nekutaura mazano. Muridzi webhusaiti ino, www.fitnessrebates.com, ndiye ari mubatanidzwa muAmazon Associates, Linkshare, uye CJ.com Bato reZvitsi, izvo zvakagadzirirwa kupa nzira dzekuchengetedza zvikwereti kuburikidza nekubatanidza zvigadzirwa kana mabasa.
Kuzarura Zvinhu Zvokubatanidza:
Zvimwe zvezvibatanidzwa mumatanda edu "zvakabatana." Izvi zvinoreva kana iwe ukanyora pachibvumirano uye uchitenga chinhu / basa, iyi webhusaiti inogona kugamuchira imwe nhengo yekutumirwa. Izvi zvinoshandiswa zvingashandisa software yechitatu yekutevera. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukanyora pachibvumirano uye enda unoshanyira nzvimbo yakagumiswa, cookie ichaiswa mu web browser yako iyo ichaita kuti webhusaiti iyi iwane mutemo "kana" iwe unotenga chigadzirwa kune rumwe rutivi.
Pasinei nokuti, FitnessRebates.com inokurudzira michina kana maitirwo atinotenda anotowedzera kukosha kuvadzidzi vedu. Tiri kuzivisa izvi maererano neHerald Trade Commission ye16 CFR, Chikamu 255: "Kutungamirira pamusoro peKushandiswa kweKubvumira uye Uchapupu."
Kubudirira kwehutano Ndiwo anoshanda mubhuku rinonzi Amazon Services LLC Associates Program, iyo inobatanidza purogiramu yekuparadzira yakagadzirirwa kupa nzira kune vadzidzisi vepawebsite kuti vawane mari yekudhura mari nekutengesa nekubatanidza kumazon.com uye chero imwe nzvimbo yewebhu inogona kunge yakabatana neAmerica Service LLC Associates Purogiramu
CJ, ShareASale, Clickbank Affiliate Disclosure Notice:
Kubudirira kwehutano kunobatanidzwa muCJ (Commission Junction), ShareASale, uye Clickbank masangano epurogiramu, uye inogona kubhadharwa kana iwe uchitenga chigadzirwa / basa kana kusainira kwekugovera mushure mekunge uchinyatsobatanidza chibatanidza chekubatanidza kubva paWhite Rebates website. Cherechedza: Komisheni Junction & ShareASale inoratidzira zvirongwa zvinokurudzira nhamba huru yezvigadzirwa zvakasiyana uye kana mabasa kubva kune dzakawanda makambani akasiyana.
DoubleClick nomuseve Cookie:
Google, sevatengesi vechitatu, inoshandisa kuki kuti ishandise zvikwata pa www.fitnessrebates.com. Kushandiswa kweGoogle yeDART cookie kunoita kuti itange kushambadzira kune vashandisi zvichienderana nekushanyira kwavo kune www.fitnessrebates.com nedzimwe nzvimbo paIndaneti. Vashandi vanogona kusarudza kushandiswa kweDOC cookie nekushanyira mvumo yeGoogle uye yehutano hwehutano hwehutano pane URL inotevera: http://www.google.com/privacy_ads.html
Kana ukasarudza kuenzana nesu kuburikidza ne email, tinogona kuchengeta zvinyorwa zvemashoko ako emajeri pamwe chete
yako email kero uye mhinduro dzedu. Tinopa kuchengetedza kwakafanana kwekushandisa kwekugadzirwa kwemagetsi kwatinoshandisa pakuchengetedza ruzivo rwakagamuchirwa paIndaneti, mail uye foni. Izvi zvinoshanda zvakare apo iwe unyoresa kwewebsite yedu, nyora nekunyorera chero ipi zvayo mafomu edu uchishandisa email yako kana kuti utenge kunzvimbo ino. Kuti uwane mamwe mashoko ona ma email mazano pasi apa.
Tashandisa Sei Mashoko Aunotipa?
Kunyanya kutaura, tinoshandisa ruzivo rwemunhu pachake nekuda kwekutungamirira bhizinesi redu, kupa
basa revatengi nekuita kuti zviwanike zvimwe zvinhu uye mazano kune vatengi vedu uye vanotarisira vatengi.
Hatizowana ruzivo rwekuzviziva-iwe pachako pamusoro pako paunoshanyira isu
site, kunze kwekusarudza kwako kupa mashoko akadaro kwatiri, uyewo ruzivo rwakadaro harungatengeswi kana zvimwe
kuendeswa kune vanhu vatatu vasina ruzivo pasina kubvumirwa nemushandisi panguva yekuunganidza.
Tinogona kuzivisa ruzivo kana tichimanikidzirwa zviri pamutemo kuita saizvozvo, mune mamwe mazwi, apo isu, nekutenda kwakanaka, tinotenda kuti mutemo unoda kana kuti kudzivirirwa kwekodzero dzedu dzepamutemo.
Isu takazvipira kuchengetedza kero yako ye-e-mail yakavanzika. Isu hatitengesi, kubvarura, kana kutengesa kushandiswa kwemashoko edu
kune vamwe vatatu, uye isu hatisi kupa ruzivo rwako pachako kumunhu wechitatu wega wega, hurumende
sangano, kana kambani chero ipi zvayo kunze kwekunge yakamanikidzwa kuita izvi nomutemo.
Tichashandisa kero yako ye-e-mail kuti tipe ruzivo rwakakodzera panguva ino nezvewebsite uye zvimwe zvinhu / maitirwo angave anofarira iwe.
Tichachengetedza ruzivo rwamunotumira kuburikidza ne-e-mail maererano nezvinodiwa nemutemo wehurumende.
Mukuteerera neCAN-SPAM Mutemo, ese e-mail inotumirwa kubva kusangano redu ichajekesa kuti an e-mail anobva kupi
uye kupa ruzivo rwakajeka pamusoro pokuti ungabata sei mutumwa. Mukuwedzera, ose e-mail magwaro achave anewo
mashoko akajeka pamusoro pokuti ungadzibvisa sei kubva pakushamba kwemashoko edu kuitira kuti urege kugamuchirazve e-mail
kutaurirana kubva kwatiri.
Kusarudza / Kubuda-Kubuda
Nzvimbo yedu inopa vashandisi mukana wekusarudza-kutambira kugamuchira kukurukurirana kubva kwatiri uye vatinonamata navo nekuverenga
iyo isingabhadhari mirayiridzo iri pazasi yepi e-mail yavanowana kubva kwatiri panguva ipi zvayo.
Vashandi vasingashuvi kugamuchira tsamba yedu kana zvigadzirwa zvekutsvaga vanogona kusarudza kubva pakugamuchira izvi
nhaurirano kuburikidza nekutsvaga kusununguka kwekutsvaga kwekutsvaga mune e-mail.
June 10, 2013 FitnessRebates No Comment